सोधिने प्रश्न - Saida ग्लास लिमिटेड
1.How ग्लास उत्पादन छ?
विकसित देशहरूमा उत्पादन लगभग सबै ग्लास को "फ्लोट प्रक्रिया" को प्रयोग गरेर बनाएको छ। ग्लास संरचना सामाग्री, मुख्य रूप सिलिका बालुवा, सोडा खरानी र चूना पत्थर, दन्किरहेको मा पग्लियो छन् र त्यसपछि पिघला टिन को एक स्नान गर्ने बग्ने। ग्लास गठन गरिएको छ र यो एक नियन्त्रित ठंडा कोठामा छ एक एनिलिंग lehr, गर्न टिन स्नान देखि उत्प्रेरित गर्छ रूपमा बिस्तारै ठंडा गर्दछ। यो Annealed ग्लास निरन्तर रिबन, आकार मा कटौती र अन्तिम चरणमा मा प्याकेज छ जो को रूप मा एक प्रक्रिया मार्फत उत्प्रेरित गर्छ।
Annealed ग्लास थप थुप्रै तरिकामा निर्मित गर्न सकिन्छ। विभिन्न प्रकारका कोटिंग्स धेरै दृश्य प्रभाव ओप्टिकल गुण हासिल र असर लागू गर्न सकिन्छ। साथै, ग्लास गर्मी-उपचार यसको बल वृद्धि र यो सुरक्षा ग्लाजिंग गुण दिन हुन सक्छ। ग्लास को इन्सुलेट गुण सुधार सुक्खा हावा ठाउँ द्वारा विभाजित छन् ग्लास दुई वा बढी टुक्रा अर्थ, एक इन्सुलेट ग्लास एकाइ मा राख्न सकिन्छ।
2.What ग्लास को सबै भन्दा साधारण प्रकार हो?
फ्लोट ग्लास पनि Annealed ग्लास भनिन्छ, ग्लास को सबै भन्दा साधारण प्रकार छ। फ्लोट ग्लास स्पष्ट वा Tinted हुन सक्छ।
3.Thermal ग्लास Tempering रासायनिक सुदृढ बनाम: फरक के?
चरम वातावरण लागि ग्लास समाधान
ग्लास संसारको सबैभन्दा परिष्कृत सामाग्री बीचमा छ। विशेषता ग्लास उच्च दबाव, अत्यधिक गर्मी र असाधारण वातावरण सामना गर्न सक्छन्।
रासायनिक सुदृढ र थर्मल tempering: त्यहाँ ग्लास बलियो लागि दुई प्राथमिक विधि हो। यी प्रक्रियाहरू दुवै यो तनाव को एक अवस्थामा छ जो भित्री ग्लास, भन्दा एक उच्च सङ्कुचन गर्न कारण ग्लास को बाहिरी सतह बदल। विशिष्ट आवेदन निर्भर गर्दछ, प्रत्येक प्रक्रिया भौतिक अन्तिम मेकअप लागि अद्वितीय लाभ प्रदान गर्दछ।
पनि आयन विनिमय रूपमा जानिन्छ, रासायनिक यो एक पिघला पोटासियम नुन स्नान मा, ग्लास मा सोडियम आयनों submerging पैदा द्वारा बलियो व्यवहार ग्लास को स्नान देखि पोटासियम आयनों द्वारा प्रतिस्थापित गर्न। को पोटासियम आयनों, सोडियम आयनों भन्दा ठूलो हो जो, जब पोटासियम समाधान गर्न स्थानन्तरण साना सोडियम आयनों द्वारा बाँया अंतराल मा आफूलाई squeeze। कोर तनाव compensating छ जबकि ग्लास को सतह को सङ्कुचन राज्य मा त हो।
को स्नान को रासायनिक संरचना यो प्रक्रिया सामाग्री अन्तिम आवेदन गर्न अनुकूल गर्न अनुमति दिने, व्यापक भिन्न हुन सक्छन्।
रासायनिक सुदृढ कुनै उल्लेखनीय विकृति र बलियो, क्षार-धनी सामाग्री को एक धेरै खोक्रो सतह पत्र संग एक उच्च-प्रदर्शन ग्लास सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष ग्लास को जोडी बल यसलाई मात्र होइन कठोर वातावरण लागि तर पनि कंडक्टर उच्च-प्रदर्शन आवेदन, अर्धचालक, ऊर्जा, चिकित्सा, र थप लागि आदर्श बनाउँछ। रासायनिक सुदृढ गर्मी tempering भन्दा धेरै पतली ग्लास मा गर्न सकिन्छ।
स्वभावका ग्लास तुरुन्तै तीव्र ठंडा पछि एक तीव्र ताप प्रक्रिया undergoes। यो चरम तापमान पारी ग्लास सतह गराउँछ र, एक अत्यन्तै कठिन बाहिरी सतह सिर्जना एक tensioned ग्लास कोर संग संकुचन गर्न किनाराको।
भङ्ग गर्दा, खतरनाक shards को जोखिम हटाइ, गोलाकार किनाराको साथ सानो कण मा ग्लास विश्रामहरू स्वभावका। यो आवेदन सहित एक विस्तृत दायरा लागि एक आदर्श विकल्प स्वभावका ग्लास बनाउँछ:
सुरक्षा ग्लास (windshields, Windows र projectiles गर्न जोखिम संग परिस्थिति)
उच्च-तापमान वातावरण र थर्मल तनाव
घरेलू वस्तुहरू र आगो सुरक्षा, दैनिक सुरक्षा र पर्यावरण चुनौतीहरू दुवै रासायनिक बलियो र thermally स्वभावका ग्लास प्रस्ताव असंख्य समाधान गर्न प्रयोगशालाहरुमा गर्न उड्डयन र एयरोस्पेस र उद्योग देखि।
Saida ग्लास बाट ग्लास समाधान
कुनै पनि आकार या आफ्नो परियोजना को माग मामिला, Saida ग्लास मद्दत गर्न सक्छ। हाम्रो विशेषज्ञहरु अति-उच्च दबाव चिसो काटन, सीएनसी मशीनिंग, चमकाने, ड्रिलिंग, मुद्रण, र हाम्रो रासायनिक सुदृढ र थर्मल tempering सेवाहरू दुवै समर्थन गर्न अन्य क्षमताहरु निर्माण को एक पाहुना प्रस्ताव।
4.What म एक उद्धरण प्राप्त गर्न प्रदान गर्नेछ?
1 तपाईं चाहनुहुन्छ ग्लास को दयालु र यसको उपयोग परिदृश्य।
ग्लास को2रेखाचित्र।
विवरण 3. आवश्यकताहरु।
4 आदेश मात्रा।
5 कतिपयले आवश्यक लाग्छ।
5 कसरी आदेश?
1 विस्तृत आवश्यकताहरु / रेखाचित्र / मात्रा, वा एक विचार वा स्केच हाम्रो बिक्री सम्पर्क गर्नुहोस्।
यो producible छ भने2हामी आंतरिक हेर्न जाँच, त्यसपछि सुझाव प्रदान गर्न र आफ्नो अनुमोदनको लागि नमूनाहरू बनाउन।
3. हामीलाई आफ्नो आधिकारिक आदेश इमेल, र जम्मा पठाउनुहोस्।
4 हामी ठूलो उत्पादन तालिका मा अर्डर राख्नु, र प्रति स्वीकृत नमूनाहरू रूपमा उत्पादन।
5 प्रक्रिया ब्यालेन्स भुक्तानी र हामीलाई सुरक्षित वितरण मा तपाईंको धारणा सल्लाह।
6 आनन्द लिनुहोस्।
6.Can म आफ्नो कारखाना भ्रमण? त्यो कहाँ छ?
स्वागत छ। हाम्रो कारखानों डोङ्गुवान चीन मा स्थित हो, तपाईंले आउनेछ र धेरै मान्छे, हामी विवरण मार्ग निर्देशन सल्लाह कसरी गर्दा हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
आवरण ग्लास, स्वभावका ग्लास पैनलों, सिरेमिक छापा कवर ग्लास , स्मार्ट वाच कवर ग्लास , घर उपकरण स्वभावका ग्लास, ग्लास लागि प्रकाश कवर ,